Love – Maharmedianews
အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ် လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁)… အိပ်မက်မက်တယ်
မင်းနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ နားလည်မှုဆိုတာ.. . .ရန်ကုန်က ကားသမား မန္တလေးမြို့လည်ခေါင်မှာ သွားမောင်းသလိုပါပဲ
January 22, 2019 admin555
တကယ်တော့ ဘေဘီ မင်းနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ နားလည်မှုဆိုတာ ရန်ကုန်ကကားသမားမန္တလေးမြို့လည်ခေါင်မှာသွားမောင်းသလိုပါပဲ မင်းရပ်မယ်ဆိုရပ်ချင်ရပ်လို့ရပါတယ် မင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလည်း သွားချင်သွားလို့ရပါတယ် ရပ်မလိုလို ကွေ့မလိုလိုနဲ့ ဒဲ့ပြန်သွားချင်လည်း သွားလို့ရပါတယ် ကိုကသီးခံပေးပြီးသားပါ တကယ်တော့ ဘေဘီ မင်းနဲ့ကိုနဲ့ကြားကြ နားလည်မှုဆိုတာ မိုးကုတ်မြို့ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းလိုပါပဲ မင်းအရင်ချမှာလား ကိုအရင်ချရမလား
သိပ်ချစ် တတ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေး တွေကို မိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ ထားခဲ့ကြသလဲ
January 11, 2019 admin555
လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို အရမ်းချစ်တာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က သူ့ကို အရမ်းချစ်တာမျိုးကိုရော ခံစားရဖူးပါသလား ။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အရမ်းချစ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိကြပါဘူး ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ( ၁
ကိုယ်နဲ့ ပြတ်စဲပြီးနောက်တစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းတန်းရသွားတဲ့ သူအတွက် ဆွေးရတာမတန်ဘူး။
January 5, 2019 admin555
ကိုယ်နဲ့ ပြတ်စဲပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုချက်ချင်းတန်းရသွားတဲ့ သူအတွက် ဆွေးရတာမတန်ဘူး။ သူနောက်တစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းကောက်တွဲပြီး Relationship ကိုအတိအလင်းကြေညာတဲ့အခါပိုလို့တောင်မတန်ဘူး ကိုယ်ကသစ္စာရှိရှိချစ်သလောက် မြတ်နိုးခဲ့ရသလောက် သူကနည်းနည်းမှ လှည့်မကြည့်ပဲဖြည့်မတွေးပဲ တွေ့ကရာ သာသာနာနာ ကောက်တွဲပြစ်လိုက်ပြီ ဆိုတည်းကမှ ကိုယ့်ကိုမချစ်ခဲ့တာသေချာပီပဲ ကိုယ်စဉ်းစားတယ် ငါနဲ့ပြတ်တာမကြာဘူး ပြတ်တော့နောက်လူနဲ့ကောက်တွဲပြတာ
မင်းသူ့ကိုချစ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လားဒါဆို ဒါလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ပါဦး…
မင်းသူ့ကိုချစ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လားဒါဆို ဒါလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ပါဦး… မင်းသိလား လူတစ်ယောက်ကိုသဘောကျဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေး တကယ်ချစ်ဖို့သာခက်ခဲတာပါချစ်တယ်ဆိုတာအပြောနဲ့မလုံလောက်ဘူးအရာအားလုံးကိုလက်ခံပေးနိုင်ပြီး ထပ်တူကျနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲလိုမဟုတ်ပဲ လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အားသာချက်တွေကြောင့်လူတစ်ယောက်ကိုမချစ်ပါနဲ့ လူတိုင်းမှာ အမှောင်ခြမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲလိုပဲ မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူမှာလည်းရှိမှာပဲ… လူတိုင်းမသိနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့အမှောင်ဖက်ခြမ်းကအကျင့်စရိုက်တွေ အားနည်းချက်တွေ သိမ်ငယ်မှုတွေနဲ့တခြားမကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေနိုင်တယ် သိသွားရင်ကောမင်းသူ့ကိုဆက်ပြီးချစ်နိုင်မှာလား တစ်ခါတစ်လေ သူစိတ်မကြည်လို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလူတချို့ကိုဘုကန့်လန့်တိုက်တဲ့အခါ မင်းသူ့ကိုနားလည်ပေးနိုင်မှာလား တစ်ခါတစ်လေ
နှစ်ယောက်သား လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ . . .
December 27, 2018 December 27, 2018 admin555
လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ . . . တစ်ယောက်က အဆင်ပြေသွားမှာဆိုပြီး နေနေပေမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ ပြန်လာမှာပါဆိုပြီး မျှော်လင့်နေတယ် . . . တစ်ယောက်က အစားထိုးဖို့ အချစ်သစ်ရှာနေခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ ဝေးသွားသည့်တိုင် သစ္စာရှိနေတယ် .
ချစ်သူ သက်တမ်း ကြာလာတာတဲ့အမျှ ပြသနာတွေပဲတက်နေတယ်ဆိုတာ ဒါတွေကြောင့်ပါ
November 14, 2018 admin555
ချစ်သူသက်တမ်း ကြာလာရင် တက်လာတဲ့ စောက်ပြသနာ တွေကြီးပဲဆိုတာအရမ်းချစ်လာလို့ ဖြစ်လာကြတာ….။ အရင်အခြေနေ အရင်လိုအချစ်တွေ မဟုတ်တော့တာကပြသနာ စတော့တာပဲ….။ အရင်တုန်းက တွဲခါစဆိုတော့ သူသူငါငါအရှက်တရား ဆိုတာရှိတယ် စည်းတွေ အပြန်အလှန်ထားကြတယ် နားလည်ပေးနိင်တယ် ဆိုတာတွေ ပြောမယ် စိတ်ထဲ